March 2010 – Everybody Read TChen
ခုတော့လဲ ကိုနဲ့မဆိုင်သလို မျက်နှာလွဲခဲပစ် လုပ်နေတယ်လေ အော် ဥပဒေက ဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ဂံဂျား တားတွေ ပါရင် ပြန်ပို့မယ်တဲ့ (အိ…………………..) Deported လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ် မီးကကြောက်တာပေါ့လို့ နူကလိုခ (ယိုးဒယားလို သမီးကြောက်တယ်လို့ပြောတာပါ)
ပြီးတော့ ဒီနေ့ အဲ့ဒီ အနီ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ပြန်လာလိုက်တယ် ပြီးရော သူတို့က လမ်းတွေပိတ်ထားတော့ တက္ကစီတွေ တခြားဆိုင်ကယ်တွေက မှဝင်ခွင့်မရဘဲ အံမယ် အဲ့ဒီ ဆိုင်ကယ် သမားက ဝေါ့ကီ တော့ကီ နှစ်ခု ခါးမှာချိတ်လို့နော်.. အလန်ဇယားဆရာ ကဲကဲ ပုံတွေကိုရှု….(နာဂစ်ကိုတောင် သတိရသေး tank တွေနဲ့နေကြတာမို့ပါ) ပုံတွေက သိပ်တောင်မကောင်းဘူး ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ဖုန်းနဲ့ ခိုးရိုက်ရတာမို့လို့
Posted on March 23, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ3 Comments on ဒီနေ့ နဲ့ အနီ၊ မနက်ဖြန် ဘယ်လိုလဲ
17 နှစ်ရဲ့ မိုးကောင်းကင်A: အင်း…အချစ်ဆိုတာလဲ အတိတ်တွေလိုပဲ ကျော်လွန်သွားတတ်တဲ့အရာပါB: ရပါတယ် ကိုယ်တို့ မြန်မြန်ပြေးကြတာပေါ့…A: ပြေးအုံးမယ်…………?B: သူကို ပြန်မှီလာအောင်ပြေးကြမယ်လေ..A: ဒါပေမယ့်…ကျတော် ညောင်းနေပြီ…B: ကိစ္စမရှိဘူး ကိုယ်မင်းကို ကုန်းပိုးမှာပေါ့….လာ…!A Chen 01:10 am22th March 2010Home, Bangkok
Posted on March 22, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ1 Comment on 17 နှစ်ရဲ့ မိုးကောင်းကင်
Posted on March 17, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဗဟုသုတများ12 Comments on ခြင်ကိုက်ရင် HIV ကူးပါသလား?
Posted on March 16, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ5 Comments on Happy Birthday နန်းညီ
ကဲထုံးစံအတိုင်း ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ စချက်လိုက်ကြရအောင်နော်….
ပဲစိမ်းမှုန့်ရေဖျော်ပါ။ ရေအေးနဲ့ပဲဖျောရပါတယ် ရေနွေးမသုံးရပါဘူး။ ဘေးကတော့ နို့စိမ်းဘူးနဲ့ အုန်းနို့ဘူးပါ။ တီကတော့ လျာရှည်ပြီး နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ပါတယ်။ တမျိုးထဲကို လုံလောက်အောင်ထည့်လဲရပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြတာပါ။ တချို့က အုန်းနို့မှ ကြိုက်ပါတယ်။ နာမည်ကိုက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကိုးလေနော်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်ကာလ ပြောင်းလဲလာတော့ လူတွေခမျာ ရောဂါထူပြောလာပါတယ် အုန်းနို့က တက်တယ်။ သွေးတိုးတယ် ဘာညာ စသဖြင့်ပေါ့လေနာ်။ အဲ့တာနဲ့ တမျိုးထွင်ပြီးတော့ နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲဆိုတာ ချက်လာကြပါတယ်။ တီကတော့ နှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းထားတဲ့ အုန်းနို့ နို့စိမ်း ခေါက်ဆွဲပါ (ရှည်တာပေါ့အေ နော့ ချက်ရင်းနဲ့တောင် ဒေါ်ဒေါ် သစ်ကို သတိရမိသေးတယ် သူဆိုရင်တော့ကြိုက်လိုက်မယ့်အမျိုးလို့) နောက် ဘေးနားက ပဲသွေးပါ (ဟုတ်ကဲ့ ဘဲမဟုတ်ပါ။ သက်သတ်လွတ်ပါ ပဲနဲ့လုပ်ထားတာပါ တီကတော့ ကြိုက်လို့ များများထည့်ပါမယ် ကြိုက်တတ်ရင် ငါးဖယ်လေးတွေ ကြော်ထည့် ဘဲဥ ပြုတ် ဓါးနဲ့ ပါးပါးလှီး ပြီးထည့် ပိုကောင်းပါတယ် တီကတော့ ဘဲဥ ကို ဟင်းရည်ကျက်ခါနီးမှာ သတိရတဲ့အတွက် မထည့်လိုက်ရပါဘူး အင်း……………အသက်တွေလဲကြီးလာတော့ မှတ်ဥာဏ်တွေလဲမကောင်းတော့ပါဘူး အေတို့ရယ် တီတီချမ်းကနေ အဖွားချမ်းဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါ့)
ကဲ ကြည့်။ တီကတော့ ခုနက ပြောတဲ့ အကြော်တွေ မကြိုက်လို့ ရိုးရိုးပဲစားပါတယ်။ ဟင်း………………………….ခေါင်းမှ ခေါင်း……………..တီချမ်းခေါက်ဆွဲ…………..
Posted on March 14, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ခေါက်ဆွဲ10 Comments on တီချမ်းရဲ့ တပတ်တာ ဝခ်ကန်း ဟော်လီးဒေး
ငါ့မှာ အခုနဲ့မတူတဲ့ ဘဝ တခုများရှိနေလိမ့်မလား
Posted on March 14, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနမျာ3း Comments on ကြုံကြိုက် ဆုံခိုက်
ရှင်ခြင်းနဲ့ သေခြင်းကြားက အကွာအဝေးမဟုတ်သလို
ငါမင်းကို အသည်းနှင့်အောင် ချစ်နေတယ်ဆိုတာ
Posted on March 12, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ1 Comment on တယောက်တည်းအိပ်တဲ့ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်
10:10 pm (who miss me???)
Posted on March 11, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ1 Comment on အပွေ့အဖက်